Safidy fandefasana ecommerce 3 izay mitondra ny fitondran-tena mividy | Martech Zone
Safidy fandefasana ecommerce 3 izay mitondra ny fitondran-tena mividy
Alatsinainy Desambra 19, 2016 Douglas Karr
Fotoana vitsivitsy tamin'ny taona lasa, Omaha Steaks tsy fantatra mazava fa nanomboka namily antso an-tariby tamin'ny nomeraonay Google Voice tsy navoaka. 20 eo amin'ny 50 eo ny eo ho eo isan-tsofinay ary mihamaro hatrany ny isan'ny manakaiky ny Krismasy. Nandefa mailaka tamin'izy ireo aho, nifandray tamin'izy ireo tamin'ny Facebook, ary mbola tsy afaka nanery azy ireo hamaly ireo antso an-tariby miisa 800 na mahery izay mitatitra ireo olana momba ny fandefasana na fanontaniana mikasika ny baiko. Raha fantatrao ny olona avy amin'ny ekipan'ny ekipany, tiako ny mahita ireo mpanjifa ireo karakaraina sy voahitsy ny olan'ny fitaterana… tena mahasosotra izany.
Ny zavatra asongadiny koa dia ny fomba fandefasana kritika rehetra fividianana ecommerce. Raha tsy misy ny safidy fandefasana azo antoka sy mahomby, ny sandan'ny serivisy (na ny tsiron'ny steak) dia very mandrakizay. Vao haingana i Walker Sands no naneho ny maha-zava-dehibe ny fandefasana entana amin'ny fividianana ny mpanjifa:
Ny fandefasana maimaimpoana dia mitobaka amin'ny fandefasana amin'ny andro iray ihany - Ny fandefasana maimaim-poana dia mitohy ho fandrisihana lehibe amin'ny fiantsenana, miaraka amin'ny saika mpanjifa sivy amin'ny 10 mitatitra fa ny fandefasana maimaim-poana dia hahatonga azy ireo hiantsena bebe kokoa amin'ny Internet, raha efa ho ny antsasaky ny mpanjifa milaza fa ny fandefasana entana amin'ny andro mitovy dia hahatonga azy ireo hiantsena bebe kokoa amin'ny Internet. Source: Walker Sands 2016 ho avy amin'ny fianarana antsinjarany
Ny fandefasana antoka dia mitazona lanja betsaka ho an'ny mpanjifa - ny lojika dia efa singa iray manandanja ho an'ny mpanjifa, ary hihena io isa io rehefa manakaiky ny Noely. 68% ny mpanjifa mandiniha fandefasana maimaim-poana rehefa mifidy mpivarotra, ary 62% diniho ny fandefasana antoka azo antoka, izay manan-danja lehibe amin'ny mpanjifa ao anatin'ny 10 andro ho avy. Loharano: Astound Commerce's Tatitra fialantsasatra 2016
Ny hafainganam-pandefasana sy ny vidiny dia afaka manimba na mivarotra - 60% an'ny mpikambana Amazon Prime ary 41% an'ny mpikambana tsy praiminisitra nilaza fa ny fandefasana entana miadana dia manakana azy ireo tsy hividy. Ary ny ankamaroan'ny mpamaly - mihoatra ny 85% - nanaiky fa ny saram-pandefasana dia manakana azy ireo tsy hividy entana. Source: Fandinihana mpampiasa Amazon mpanome hevitra
Miorina amin'ny famakafakana mpanjifa amerikana maherin'ny 1,400, ny tatitry ny taona fahatelo nataon'i Walker Sands dia manadihady ny haitao any aoriana izay tompon'andraikitra amin'ny famoronana fiovan'ny fitondrantenan'ny mpanjifa tato anatin'ny taona vitsivitsy. Amin'ny alàlan'ny fandalinana lalindalina kokoa ny angon-drakitra, ny fanadihadiana dia mamakafaka ireo fanovana lehibe mitranga eo amin'ny sehatry ny haitao fivarotana sy ny zavatra antenain'ny mpanjifa sy ny mpivarotra ho an'ny 2016 sy ny sisa.
Walker Sands '2016 Future of Retail Study dia mandinika ny fiovan'ny toetran'ny mpanjifa sy ny fiantraikany lehibe.
Sintomy ny 2016 ho avy amin'ny fianarana antsinjarany
Tags: maimaim-poana ny fandefasanaho avy amin'ny fivarotana antsinjaranyfandefasana azo antokaOmaha Steaksmamerina amin'ny laoniny ny varotra antsinjaranyFandefasanahafainganana fandefasanafasika mandehandeha
Ny fiantraikan'ny vahaolana azo antoka amin'ny fandoavam-bola amin'ny Internet
Fametrahana ho an'ny fahombiazan'ny marketing amin'ny 2017